Home » ngwaahịa » Nhicha » Akpa Nyo
Gọghari akpa nyo akpa na iyo Cartridges
1. Main ngwaahịa: abụọ edemede nke na-ajụ alkaline na alkaline free iko eriri nyo ákwà (akpa).
2. ụdị dị iche iche: ọgwụgwọ ọkụ, mmanụ silicone, graphite.
3. iche iche ọkpụrụkpụ: 0.3-0.5mm
4. dị iche iche dayameta
Akpa uwe polyester
A na-eme akpa polyester ihe mkpuchi 100% filament polyester, mgbe agịgapịrị gbara agba, a na-akpọ caednder okpomọkụ ka calender maka ihe na-ahụ maka polyester filter, mgbe ahụ, polyester filter chere nwere ike itinye n'ime akpa polyester.
E Nwere Finish: abụ olu, kalenda, okpomoku ọkụ PTFE membrane, W / O, ọgwụgwọ mgbochi.
Ihe nzacha akpa Polyester na-agbasa oge ịgbaji bụ ihe na-erughị 20% maka MD na 40% maka CMD, ihe na-adịghị ala ala, nwere ike ịrụ ọrụ nke ọma na 130 deg C. ihe dị ọnụ ala karịa ihe ndị ọzọ, nke a na-eji n'ọtụtụ usoro ụlọ akpa.
Glass eriri nyo ákwà ka nke faiba glaasi yarn, na pụrụ iche ọgwụgwọ dị ka graphite, sịlịkọn, ptfe azọnye, megide acid ọgwụgwọ na ndị ọzọ na chemical ọgwụgwọ. ọ bụ ezigbo elu okpomọkụ iguzogide nyo ákwà na faiba glaasi nyo akpa na-n'ọtụtụ ebe na ulo oru ájá ọcha ebe, bag ụlọ, ikuku ndu na bara uru ájá imegharị ihe, wdg
1. ezigbo okpomọkụ na-eguzogide, adabara ogologo oge iji n'okpuru okpomọkụ n'okpuru 280 deg.
2. ezigbo uzuzu ekpepụsị arụmọrụ, ala ike coindumption maka uyi mwepụ.
3.The size nke faiba glaasi nyo akpa bụ ihe mụ, ọ dịghị eriri shrinkage n'okpuru elu okpomọkụ.
4. ezigbo chemical na-eguzogide: ma e wezụga hydroelectric acid ike acid, na ike alkaline, ọ bụ ndị ọzọ anụ karịa ndị ọzọ nyo ọkara.
5. Faiba glaasi nyo ákwà na-adịghị ịmịkọrọ mmiri na iru mmiri
6. nzacha oru oma nke faiba glaasi nyo akpa nwere ike ịbụ ihe karịrị 99.5% etc na enwetaghị ájá n'okpuru PM2.5, anyị nwere ike nweta 20mg ikuku ntọhapụ.
7.High ike nke faiba glaasi nyo ákwà, nwere ike ịbụ ihe karịrị 3000N / 5 * 20cm
1. Ọdịdị okpomọkụ 150 Deg c,
2. Oke aka gbara bụ 150 deg c.
4. Pụtara ikuku Permeability: 10-15 m3/m2/min@12.7mmH2O
5. Ọ bụ usoro mgbasa ozi dị ọnụ ala kachasị dị na akpa nzacha mkpo. Ihe nzacha akpa polyester bụ ihe kachasị ewu ewu na sistemụ akpa.